Sina Birao fandalinana manoratra ankehitriny maoderina miaraka amina fitoeram-boky ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy | Yifan
Birao fandalinana manoratra maoderina miaraka amin'ny fatin-boky ho an'ny ankizy
Ity latabatra famolavolana tsotra ity misy tahiry betsaka, vatasarihana 1, kabinetra 1, fitoeram-boky misy cubed misokatra 1.
TOETOETRA Drawer 1, tratra 1 misy varavarana
DIMENSION TABLE 120/140 / 160x60x75cm
Namboarina tamin'ny fitahirizana ao an-tsaina, mamela anao hihazona ny filaminana sy ny fandaminana ao amin'ny biraon'ny tranonao. Manasongadina ny birao lalindalina kokoa, 50 / 60cm, ny kabinetra lalina dia mahatonga ny trano tonga lafatra ho an'ireo antontan-taratasy tsy miankina ireo. ary misokatra ny takelam-boky goba, izay manome anao ny toerana mety hipetrahanao hianatra, hanoratra, na hiasa asa.
Ny fitaovana dia MDF sy sombin-kazo, fenitra E1, mifanaraka amin'ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana fiarovana. Miaraka amin'ny velaran-tany laminina melamine, misy fanoherana afo sy fanoherana ny volo, azo ovaina tokoa izy io.
Misy habe 3 azo ampiasaina, ny iray kely kokoa dia 100x50x75cm, miaraka amin'ny rakipeo dia 80x24x60cm, ny antonony dia 120x60x75cm, miaraka amina rakipeo 100x24x60cm, ny iray lehibe kokoa dia 120x60x75cm, ny takelaka dia 120x24x60cm, ny haavon'ny ankapobeny dia 135cm misy talantalana goba.
Misy talantalana goba 2 lehibe, ny iray misy 5 cubes, iray ny 7 cubes, ahafahanao mametraka rakitra, taratasy, ho an'ny antontan-taratasy tsy miankina, misy kabinetra lalina hitazonana azy ireo. Iray ihany koa, ny talantalana dia azo ovaina, amin'ny làlana mitsangana na mianjera, mba hahafahanao manangana azy mifanaraka amin'izay ilainao.
Ny loko iraisan'ny olona dia ny hazo terebinta sy walnut, misy vatasarihana 1 ary loko fotsy ny varavarana 1.
mampiasa fitaovana avo lenta izahay, mpihazakazaka vy malama, savily malefaka.
Ny vokatray dia natao ho an'ny ankizy, fitehirizana ary azo entina ao an-tsaina ary namboarina hiatrika ny fampiasana isan'andro.
Azo antoka fa fanampiana tsara ho an'ny efitranonao sy ny birao an-tranonao izany.
Fitaovana hazo: solaitrabe
1drawer, varavarana 1, fitoeram-boky 1
talantalana azo ovaina. Miaraka amin'ny 5/7 cubes
Fivoriana tena - olona 2 atolotra anao
Fiantohana 3 taona an'i Maunfacturer
Size H135, W100 / 120, D50 / 60cm
Fahaiza-mitondra entana farany ambony 15kg
Mora ny mivory
Previous: Birao solosaina maoderina ankehitriny ho an'ny biraon'ny trano
Manaraka: Birao solosaina fanoratana tsotra sy tsotra ho an'ny biraon'ny trano
Biraon'ny solosaina birao an-trano manjaka ankehitriny ...
Latabatra solosaina maoderina ho an'ny biraon'ny trano wi ...
Birao solosaina manoratra tsotra sy matevina maoderina ...